Ity no Huawei Sound, mpandahateny vaovao vaovao an'ny marika | Androidsis
Tsy dia misy sisa tavela ho an'ireo mpikambana vaovao ao amin'ny fianakavian'i Mate hidona amin'ny tsena. Eny, ny 22 oktobra ho avy izao no daty nofidian'ny orinasa aziatika hampahafantatra ireo andiany phablet manaraka. Ary mitandrema, ny Huawei Mate 40 dia tsy ho tonga irery, satria mikasa ny hampiditra mpandahateny mpandahateny vaovao ny orinasa. Ny anaranao? Huawei Sound.
Tsy vao sambany isika miresaka mpandaha-teny maranitra an'ny marika. Amin'izao fomba izao, ilay mpanamboatra aziatika dia nanolotra ny Huawei Sound X, mpandahateny voalohany an'ny marika miaraka amina mpanampy ny feony.
Hampiasa ny mpanampy amin'ny Huawei Sound Google ve ianao?
Andian-tsary efa tafaporitsaka tamin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy Weibo izay nanamafy ny fisian'ity mpandahateny malina Huawei Sound ity. Araka ny sary miaraka amin'ity lahatsoratra ity, dia mahita maodely izay miteraka fitoviana lehibe amin'ny mpandaha-teny voalohany amin'ny marika.
Amin'izany fomba izany, ny mpikambana manaraka amin'ny fianakavian'i Huawei Sound dia hirehareha amin'ny famolavolana boribory lavalava mba hahafahan'ny feo maneno amin'ny lafiny rehetra hahatratra ny zoron-tranonao rehetra. Saingy, ny fanontaniana an-tapitrisany dolara dia ny rafitra mpanampy amin'ny feo izay hampiasainao. Ny ankamaroan'ny marika dia nitolo-batana tamin'ny hegemony an'ny Google sy Amazon, miloka tsy tapaka Mpanampy sy Alexa tsirairay avy.
fa Huawei Sound X dia manana mpanampy am-peo. Ny olana dia amin'ny Sinoa ihany no miasa, ka any Espana dia kely ny dia azony. Noho izany, tena azo inoana fa rehefa tonga any Eropa ity fianakavian'ny mpandahateny ity (afaka manararaotra ny fampisehoana Mate 40 ho azy izy ireo) dia azo inoana fa hipetraka amin'ny Alexa na Google Assistant ireo modely ireo. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy miandry ny fanambarana ofisialin'ny orinasa isika hanamafisana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Fitaovana hafa » Huawei dia hanolotra kinova fampihenana ny mpandahateny mahay
Ny antsipiriany izay hadinon'i Google tao amin'ny Chromecast vaovao